Madaxweyne Saciid Deni oo kulan la qaatay Safiirka Jabuuti ee Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Saciid Deni oo kulan la qaatay Safiirka Jabuuti ee Somalia
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Saciid Cabdullaahi Deni ayaa Maanta xeyndaabka Garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho kula kulmay Safiirka Jabuuti ee dowladda Soomaaliya Danjire Aadan Xasan Aadan.
Kulanka dhexmaray Madaxweyne Saciid Deni ioyo Danjire Aadan ayaa waxaa inta uu socday looga hadlay guud ahaan xaaladda dalka Soomaaliya marayo gaar ahaan arrimaha Doorashada ee khilaafka uu taagan yahay.
Safiirka Jabuuti ee Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Puntland u sheegay in muhiim ay tahay in heshiis laga gaaro khilaafka ka jira qabsoomida doorashada dhaceysa, isla markaana wax kasta lagu dhameeyo wada-hadal.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa waxaa kulamo kala duwan la qaatay Wakiilada Beesha Caalamka, siyaasiyiin iyo Musharaxiin, isagoo kala hadlay doorashada iyo Arrimo kale.
Wafdi ka socda Dowladda Soomaaliya oo Maanta gaaray Qatar
Madaxtooyada oo si kulul uga hadashay hadal kasoo yeeray Cumar C/rashiid